Odisha ခရီးစဉ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်နယ် | Call: + 91-993.702.7574 ဘွတ်ကင်များအတွက်
BhitarkanikaBhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်အိန္ဒိယအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika ခရီးသွားလုပ်ငန်းသင် Wetlands ၏မရေမတွက်အလှတရားကိုခံစားကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။ စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောဒီရေတောများများ၏မြေ, ခရီးသွားဧည့်အရေးပါမှုဤထူးခြားသောသောအရပ်တို့ကိုမစုပြုံနေရာချွတ်ငှက်နှင့်လိပ်, အဆိုထားပါသည် estuarine မိကျောင်း, meandering ရေချောင်းအနီးနှင့်ဝေးသောအရပ်မှငြိမ်းချမ်းပတျဝနျးကငျြ, ငှက်တို့တေးဆိုသံများနှင့်အစဉ်အဆက်လက်ခံသဘာဝအားဖြင့်ကြားဖြတ်အူဧည့်သည်များပြောင်းရွှေ့ ။ သိပ္ပံပညာရှင်များ, ပညာရှင်များ, သဘာဝတရားမိတ်ဆွေတို့ကိုနှင့်တိုးရစ်အတွေးနှင့်ရှာဖွေရေးအဘို့အပေါများအစားအစာရှိသည်။ Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစွန့်စားမှုအပေါငျးတို့သ spheres ကိုဖုံးလွှမ်း။ အရပျကိုအစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေထဲကကိုယ်စားပြုတယ်။ Bhitarkanika Odisha ၏ Kendrapara ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်မြောက်မြားစွာချောင်းနှင့်ရွှံ့တိုက်ခန်းနှင့်အတူ crisscrossed ဒီရေတောတစ်မူထူးခြားတဲ့ကျက်စားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ, Bhitarkanika တွင်အကြီးဆုံးဒီရေတောဂေဟစနစ်တစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း packages များနှင့်အတူသင်ရှာဖွေနေခဲ့စွန့်စားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါထူးခြားတဲ့ဇီဝမတူကွဲပြားမှုသဘောသဘာဝရဲ့ရင်ခွင်မှဧည့်သည်များဆွဲဆောင်။ Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်, သမင်, sambar, ဖြူကောင်, လင်းပိုင်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြူရောင်မိကျောင်းအပါအဝင်ရေငန်မိကျောင်း, Python, ရှငျဘုရငျကိုမြွေဟောက်, ရေမော်နီတာအိမျမွှော, terrapin, အဏ္ဏဝါပြောက် Leopard ကြောင်, ငါးဖမ်းကြောင်, တောတွင်းကြောင်, ခှေးအ, တောဝက်တစ်ဦးချုပ်နေရင်းဒေသများဖြစ်ပါသည် လိပ်, kingfisher, woodpecker, hornbill, ဘားခေါင်းနှစ်လုံး Geese, Brahmani ဘဲ, pintail ...
Odisha ယနေ့ခေတ်အဓိကခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာနေသည်။ ဘုရားကျောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏, သစ်တော၏သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့အတူယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရိုးရာအထိမ်းအမှတနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် စသည်တို့ကိုခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတွေအများကြီးဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဤသူအပေါင်းတို့၏နေရခြင်း, Odisha ခရီးစဉ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်နယ်ကယ့်ကိုလူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ လှပသောဟောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာပန်းပု ပြည်နယ်အတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှာလက်ရှိဖြစ်ကြသည်။ Odisha ခရီးစဉ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်နယ် Odisha ၏အဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အသိပညာတိုးပွားလာနှင့် Odisha ၏အဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုကူညီပေးသည်။ Odisha ခရီးစဉ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်နယ်တစ်ခုမှာဤကာလအတွက် Amoghasiddhi စသည်တို့ကို Tara, Manjusri ၏ပန်းပုရှာတှေ့နိုငျထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Padmapani, Lokeshvara, Vajrapani အဖြစ်သူ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက် Bodhisattva Avalokiteshvara ကိုယ်စားပြု Odisha အတွက်အရေးကြီးသောဗုဒ္ဓဘာသာပလပ်စတစ်အနုပညာပါရှိပါတယ်။ Lalitgiri မှာပြတိုက်ထဲတွင်ဧရာ Bodhisattva ကိန်းဂဏန်းများထိန်းသိမ်း။ အတော်များများကပိုထိုကဲ့သို့သောကိန်းဂဏန်းများအနီးအနား Udayagiri နှင့်ရတနာဂီရိမှာတည်ရှိသည်။ Odisha ခရီးစဉ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာတိုက်နယ်သင် Odisha အတွက်သမျှသောဤလှပသောက်ဘ်ဆိုက်များစူးစမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
BHUBANESWAR - ရတနာဂီရိ - UDAYAGIRI - LALITGIRI - JORANDA - PURI - BHUBANESWAR (05N)
Bhubaneswar လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာ, ဟိုတယ်ကိုလွှဲပြောင်းမှာဆိုက်ရောက်တွင်။ Nandankanan တိရစ္ဆာန်ရုံ (တနင်္လာနေ့များတွင်ပိတ်သည်) မှနေ့လည်ခင်းအလည်အပတ်ခရီး။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ။
နေ့ 02: BHUBANESWAR
7th ရာစုအေဒီမှ 12th ထံမှ temples- Lingaraj, Rajarani, Parasurameswar, Mukteswar, & Bhaskareswar ဗိမာနျတျော၏နံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးပြီးနောက်။ Khandagiri & Udayagiri ဂျိန်းလိုဏ်ဂူမှနေ့လည်ခင်းအလည်အပတ်ခရီးရာစုဘီစီ 2nd ပိုင်။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ။
နေ့ 03: BHUBANESWAR - ရတနာဂီရိ - UDAYAGIRI - LALITGIRI
ရတနာဂီရိ, Udayagiri & Lalitgiri ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ & ပုထိုးတော်ကြီးမှနံနက်စာအပြည့်အဝနေ့ကလေ့လာရေးခရီးပြီးနောက်။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ
နေ့ 04: BHUBANESWAR - NUAPATNA - JORANDA - BHUBANESWAR
Nuapatna ယက်လုပ်ခြင်းရွာနံနက်စာလေ့လာရေးခရီးပြီးနောက် Sadeibarini Dhokra Joranda မှာရွာ & Mahima သတ်ဖို့ ချ. ။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ။
နေ့ 05: BHUBANESWAR - KONARK - PURI - BHUBANESWAR
Dhauli (Shanti ပုထိုးတော်ကြီး), Pipili (ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းအလုပ်ရွာ), Konark (Sun ကဗိမာနျတျော) နှင့် Chandrabhaga သဲသောင်ပြင်မှာ Puri en-လမ်းကြောင်းမှနံနက်စာလေ့လာရေးပြီးနောက်။ သခင်ဘုရားသည် Jagannath ဗိမာနျတျောမှညနပေိုငျးအလည်အပတ်ခရီး (non-ဟိန္ဒူဗိမာနျတျောအတှငျးအခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်), Raghurajpur (ကျေးရွာပန်းချီ) ။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ။
နေ့ 06: Departure
ထိုနောက်လမ်းခရီးဘို့ Bhubaneswar လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှာနံနက်စာတစ်စက်ပြီးနောက်။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား reservation ပေါ်လစီ ဖျက်သိမ်းခြင်းပေါ်လစီ သတင္းေၾကျငာခ်က္ သက်သေခံချက် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ရွာေဖြလမ္းညႊန္
သတင္းေၾကျငာခ်က္ သက်သေခံချက် ထိတှေ့